Akụkọ - Ihe omuma banyere akwa akwa
Ihe omuma banyere udiri uwe
1. Uwe dị nro
Uwe ndị dị nro na-adịkarị mkpụmkpụ ma dị ọkụ, na-enwe ezigbo echiche nke drape, ahịrị dị mma, na silhouettes eke. Soft akwa tumadi gụnyere kpara akwa na silk akwa na rụrụ akwa owuwu na adụ linen akwa. A na-ejikarị akwa dị mfe eji eme ihe iji gosipụta ọmarịcha akụkụ ahụ mmadụ n’ichepụta uwe; silk, hemp na akwa ndị ọzọ akwa na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ karị, na-egosi nrịba nke ahịrị akwa.
2. Akwa mara mma nke ukwuu
Ulo crisp nwere ahịrị doro anya na ọdịdị ụda olu, nke nwere ike ịkpụ silhouette plump. Ihe a na-ejikarị bụ akwa owu, akwa akwa-polyester, corduroy, linen, na ajị anụ dị iche iche na akwa akwa kemịkal. Enwere ike iji akwa ndị dị otú ahụ na atụmatụ na-egosipụta izi ezi nke ụdị uwe, dịka adabara na dabara.
3. Ihe na-egbu maramara
Igwe a na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke ma nwee ike igosipụta ọkụ na-enwu gbaa, na-enwe mmetụta na-enwu gbaa. Suchdị akwa ndị a gụnyere akwa nwere akwa satin. A na-ejikarị ya eji ejiji abalị ma ọ bụ akwa arụmọrụ iji mepụta ọmarịcha mmetụta na-egbuke egbuke. Ihe na-egbu maramara nwere ọtụtụ nnwere onwe ịme ngosi uwe na arụmọrụ ejiji, ma nwee ike ịnwe atụmatụ dị mfe ma ọ bụ ụdị ekwubiga okwu ókè.
4. Oké na akwa akwa
Okpokoro akwa na akwa dị arọ ma sie ike, ma nwee ike ịmepụta mmetụta dị mma, gụnyere ụdị akwa woolen na akwa akwa. Uwe ahụ nwere mmetụta nke mmụba ahụ, ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị iji mgbaghara na mkpokọta oke. N'ime imewe ahụ, ụdị A na H bụ nke dabara adaba.
5. Uwe na-agbanwe agbanwe
Thelọ na-acha ọcha na-adị ọcha ma na-efegharị, ya na nsonaazụ mara mma na ihe omimi. Gụnyere owu, silk, akwa eriri kemịkalụ, dị ka georgette, satin silk, chemical fiber lace, wdg Iji gosipụta nghọta nke akwa ahụ, ahịrị ndị a na-ejikarị juputara na ọgaranya n'ụdị okirikiri H-okirikiri. ihe eji eme ihe.